KI (potassium iodide) + HOF (Hydroxy fluoride) = KOH (potassium hydroxide) + KF () + KI3 (Potassium triiodide) | Isla'egta Falcelinta Kiimikada ee dheellitiran
KI HOF = KOH KF KI3 | Isu dheellitirka Kiimikada
Hydroxy fluoride = Potassium triiodide
3KI + HOF → KOH + KF + KI3
potassium iodide Hydroxy fluoride potassium hydroxide Kaliumperyamatiyam
3 1 1 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3KI + HOF → KOH + KF + KI3
Waa maxay xaaladda falcelinta KI (potassium iodide) ee ay la falgasho HOF (Hydroxy fluoride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa KOH (potassium hydroxide) iyo KF () iyo KI3 (Potassium triiodide)?
Dhacdada ka dib KI (potassium iodide) waxay la falgashaa HOF (Hydroxy fluoride)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda HOF (Hydroxy fluoride), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3KI + HOF → KOH + KF + KI3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta HOF (Hydroxy fluoride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HOF (Hydroxy fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HOF (Hydroxy fluoride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KOH (Hydroxy fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KOH (potassium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KF (Hydroxy fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KF () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KI3 (Hydroxy fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KI3 (Potassium triiodide) badeecad ahaan?
Falcelinta KI (kali iodua) la falgal HOF (Axit hypofluourous) soo saaro KOH (kaliroxitit) iyo KI3 (Kali triiodua)
Falcelinta soo saarta walaxda HOF (Axit hypofluourous) (Hydroxy fluoride)
2K [PtF6] → F2 + 2KF + 2PTF4 KSO2F → SO2 + KF 3KI + HOF → KOH + KF + KI3
I2 + KI → KI3 3KI + (SCN)2 → 2KSCN + KI3 3KI + HOF → KOH + KF + KI3